IDouch ID na-enye anyị akara mkpisiaka maka Mac | Esi m mac
Ruo ọtụtụ afọ ugbu a, ndị nrụpụta dị iche iche ahọrọla ichedo laptọọpụ ha site na itinye ihe mmetụta mkpịsị aka. Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị dị ka adaba iji dị ka iPhone si Touch ID, na-arụ ọrụ ya n'ụzọ zuru oke ma na-enye anyị ohere igbochi ịnweta PC anyị na-enweghị mkpịsị aka anyị ma ọ bụ paswọọdụ, ọ bụrụ na ọdabara.
Mgbe Apple agbakwunyeghị ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na ngwaọrụ ya Ma nke a dị ugbu a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ mkpanaka niile ọ nwere n'ahịa dabere na iOS, ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe ike ịmeghe Mac anyị na mkpịsị aka anyị, anyị ga-abanye na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ike gwụrụ anyị ịnwe ịbanye paswọọdụ anyị oge ọ bụla anyị gbanyere Mac, anyị nwere ike iji ngwa ndị ọzọ nke jikọọ na iPhone ka otu oge anyị dị nso na Mac agbachi. Ma ọ bụ na anyị nwere ike ịkwado ngwaọrụ ịchọ ego ọhụụ na Kickstarter akpọrọ IDouch ID.
IDouch ID bụ ngwaọrụ jikọtara na USB nke Mac anyị (ọ dịkwa mma maka PC) na n-enye gị ohere na-akpaghị aka unlock kpọghee ekwt gị Mac site swiping mkpịsị aka gị n'elu ihe mmetụta. Ihe mmetụta a anaghị enye anyị ohere ịmeghe ohere anyị Mac kamakwa ọ na-enye anyị ohere iji ya dị ka ngwa 1Password.
Mgbe anyị nọ na ohere ịnweta ọrụ ọ bụla na-arịọ maka aha njirimara na paswọọdụ anyị, anyị ga-swipe ihe mmetụta ahụ ka ubi wee jupụta na ozi anyị na-akpaghị aka. na anyị abanyela ma hazie na ngwa ahụ soro ngwaọrụ a.
iTouchID ga-adị na agba dị iche iche ma anyị nwere ike ugbu a doputa otu anyị maka dollar US 99. Ego niile achọrọ iji rụọ ọrụ a bụ NZ $ 73.000 ma ha na-ewelite ihe ruru $ 43.000 ugbu a mgbe a ka nwere ụbọchị iri na asatọ iji rụchaa ọrụ ahụ chọọ ego.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » IDouch ID na-enye anyị akara mkpisiaka maka Mac
Na-edozi lag nke na-eme mgbe ịhọrọ "Mepee ya" na OS X